Right to protest – Free Expression Myanmar
FEM has submittedareport based on the experiences of Myanmar to the United Nations Special Rapporteur on freedom of assembly and association who is conductingareview of “social movements”. Background FEM’s submission to the UN Special Rapporteur’s call encapsulates the offline and online
Jun 13, 2022 by Coordinator in News သတင်း
New report: Myanmar Protesters Toolkit မြန်မာ့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူများ လက်စွဲ
Download Myanmar Protesters Toolkit >> ၂၀၂၀ ခုနှစ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ ခေတ်သစ်သမိုင်းတွင် ပထမဆုံး အရေးကြီးသော ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုများ ဖြစ်ပေါ်သည့် နှစ်တစ်ရာ အထိမ်းအမှတ် အခါသမယ ဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၂၀ ခုနှစ်တွင် လွတ်လပ်ရေးဆိုင်ရာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုများ လုပ်ဆောင်စဉ်ကတည်းက ဒီမိုကရေစီအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှုတွင် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်ကို ကျင့်သုံးလုပ်ဆောင်မှုသည် အဓိကကျ လျက်ရှိသည်။ “မြန်မာ့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူများ လက်စွဲ”စာအုပ်တွင် ပြည်သူများ ၎င်းတို့၏ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်ကို လွတ်လပ်စွာ ကျင့်သုံး နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သောဗဟုသုတများကို ဖော်ပြထားသည်။ ဤလက်စွဲစာအုပ်တွင် (၁) သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာနှင့် ပြည်တွင်းဥပဒေများ
Feb 08, 2021 by Coordinator in Publications ထုတ်ဝေစာများ
The statement is in regards to the violent dispersal ofapeaceful anti-war protest at the weekend. The statement includes some key points: The police’s denial foraprotest to happen shows that the Peaceful Assembly and Peaceful Procession Law is notanotification regime
May 15, 2018 by Coordinator in News သတင်း
The right to protest includesanumber of principles: General international standards on protest principles The right to protest includes the rights to freedom of expression; assembly; association; and public participation. Violations of the right to protest often involve violating the rights to life; freedom
Oct 25, 2017 by Coordinator in International standards စံချိန်စံညွှန်းများ
The Peaceful Assembly and Peaceful Procession Law regulates protest in Myanmar. The Law clearly violates the Myanma people’s rights to freedom of expression and assembly by: Prioritising control over rather than facilitation of protests Requiring protesters to overcome burdensome and bureaucratic hurdles Effectively making spontaneous protests unlawful
Oct 20, 2017 by Coordinator in Law ဥပဒ